Tuesday September 17, 2019 - 07:05:11 in Wararka by Super Admin
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ciidamada Jabuuti kasoo gaaray qarax xooggan oo lagula beegsaday deegaan hoos yimaad degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya wadada isku xirta degmooyinka Buula Burde iyo Jalalaqsi ayaa sheegaya in qarax xooggan uu maanta barqadii qabsaday kolonyo gaadiid ah oo ka amba baxay degmada Jalalaqsi kunasii jeeday dhanka Buula Burde.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxu uu haleelay gaari gaashaaman gaar ahaan nuuca Taawga loo yaqaan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, war rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen ugu yaraan 5 askari Jabuutiyaan ah.
Warar madax banaan oo laga helay gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qaraxa kadib ay diyaarad nuuceedu yahay Helicopter ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha macmalka Jalalaqsi halkaas oo ay ka daabushay meydad iyo dhaawacyo.
Ciidamada Jabuuti oo ay la sacdaan maleeshiyaad katirsan maamulka Hirshabelle ayaa saaka ka amba baxay Jalalaqsi waxayna doonayeen in si nabad gelya ah ay ku gaaraan Buula Burde balse dagaalyahannada Al Shabaab ayaa qarax khasaara badan dhaliyay labeegsaday.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin taliska ciidamada Jabuuti oo ku aaddan weerarkan khasaaraha lagu gaarsiiyay ciidamadooda ee ka dhacay gobolka Hiiraan.